Dhalaanka keli socodka ah ee Iswiidhan oo nolol wel wel iyo cabsi leh ku nool | Somaliska
Dhalaanka keli socodka ah ee dalkaan Iswiidhan ku nool ayaa noloshooda la soo deristay cabsi iyo wel wel, dowladduna ay sharciyo adag kula dhaqanto.
Dhamaan dhinacyadda daneeya amuuraha dhalaanka keli socodka ah ee ay ka mid yihiin, macalimiinta iskuulada, dhaqatarada, qoroyaasha iyo hey’adaha u adeega bulshadda ayaa dhamaantood ka soo saaraya baaqyo la xirriira dhalaan socodka ee dalkaan ku nool ee iyagu la soo deristay xaalado adag.
Anna Olsson, waa Dhaqtarad cilmi nafsiga bartay waxaa ay ka tirsan tahay kooxda qaabilsan carruuraha soo galootiga ee galbeedka Iswiidhan ee Västra Götaland, waxaa ay sheegtay in maalin walba la kulanto dhalaan kali socod ah oo intooda badan keligood wadankaan soo galay, kuwaas oo da’dooda u dhaxeeyso 14 il 15 jir, waxaa ay sheegtay ineey ku sugan yihiin xaalad cabsi iyo wel wel leh islamarkaasina xog ogaal u ah sharciyada adag ee lugu soo rogay iyo xaaladda dalkooda Afgaansitaan ee qaarkood lugu celinayo.
Hey’adda qaabilsan dhalaanka keli socodka ee gobolka Göteborg ayaa shaqaalaha ka howlgala waxaa ay sheegeen in maalin walba arkaan xaaladaha sii liidanaya ee dhalankaasi, kuwaas oo qaarkood ku fekera sideey nolosha isku dhaafsiin lahaayeen (isku dili lahaayeen), sidaasi waxaa sheegtay Marie Larsson oo madax ka ah xarrun lugu hayo dhalaanka keli socodka ah.
Dhalaanka keli socodka ah ee la nool qoysas kala duwan ayaa intooda badan waxaa ay gaarayaan da’da qaan gaarka, waxaana ay ka wareegayaan mas’uuliyaddii reeraha ay la noolaayaan. Waxaa sidoo kale lugu qasbay ineey dalka ka baxaan ama ay dib ugu laabtaan xeryaha qaxootiga ee laanta socdaalka si ay dalka looga musaafuriyo.
Marie waxaa ay sheegtay in sanadka soo socdo dhalaankaasi laga naaqusinayo ama laga dhimayo masruufkii la siin jiray, lana dejinayo guryo kmg ah, sidoo kalena la naaqusinayo shaqaalihii halkaasi ka howl gali jiray, taasina waxaa ay leedahay dhibkeeda. Sidaas waxaa aaminsan Marie Larsson.
“Waxaan rajeynayaa in qabiiro taakuleeyo shaqaalaha halkaasi ka howl gela la helo si ay u kaalmeeyaan shaqaalaha oo iminkaba saaran culeys ka tan badan” ayey tiri Marie Larsson oo ka wareemeeysay xaaladda dhalaanka socodka ah ku heereysan.
Dhinaca kale Anna Olsson, waxaa ay farta ku fiiqday in dhalaankaasi oo in badan oo iyaga ka mid ah si dhuumaaleysi ah ugu noolan doonaan dalka, halkii dib loogu celin lahaa Afgaanistaan. Maxaa yeelay ma muuqato fursad ay dalkaan si sii joogaan. Ugu dambeyntii dhamaan dhinacyada kala duwan ee qeybaha bulshadda ayaa ku baaqaya in dowladda ay qafiifiso sharciyada adag ee ay ku soo rogtay dhalaanka keli socodka ah gaar ahaan kuwooda ka yimid Afgaanistaan.
Dowladda Iswiidhan ayaa soo saartay dhawaan sharci xakameyn doonaa dadka magangalyo doonka ah ee Iswiidhan u soo hayaamay. Sidoo kale Iswiidhan ayaa heshiis la gashay dalka Afgaanistaan si dib loogu celiyo qoxooti badan oo reer Afaanistaan ah kuwaas oo loo diiday in la siiyo sharciga daganaanshaha.